रामवीरलाई हटाएर सांसद बन्ने वामदेवको योजनामा ‘ब्रेक’ !
काठमाडौं – काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराएर सांसद बन्ने नेकपा नेता वामदेव गौतमको प्रयासमा तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लागेको छ ।
समृद्ध नेपालका लागि संसदमा वामदेवको आवश्यकता रहेको भन्दै नेकपाका सांसद मानन्धरले गौतम निर्वाचन लड्नका लागि आफूले पार्टीमा राजीनामा बुझाएको बताएका थिए । आफूले पाँच वर्षका लागि जितेको निर्वाचन क्षेत्र वामदेवका लागि छाड्न लागेको भन्दै पार्टी पङ्तिमा मानन्धरको चर्को आलोचना भएको थियो ।
मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका तत्कालीन एमालेका नेता वामदेव गौतमले सांसद बन्न निरन्तर प्रयास गरिरहेका थिए । यसअघि डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गर्न लगाएर सांसद बन्ने योजनामा लागेका वामदेव सफल हुन सकेनन् । डोल्पाका मतदाताले बुढालाई राजीनामा गर्न सुझाव दिएका थिए ।
त्यसपछि वामदेवले अन्य क्षेत्रका सांसदहरूसँग पनि आफ्ना लागि सिट खाली गराउन पहल नगरेका होइनन् ।
काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धर भने गौतमको लागि आफूले जितेको सीट छाड्न तयार भए, जसलाई नेकपाकै नेता कार्यकर्ताले आश्चर्यको रूपमा लिएका छन् ।
सचिवालयमा नै अल्पमत
नौ सदस्यीय नेकपाको सचिवालयमा मानन्धरले दुई अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै वामदेवका लागि ठाउँ खाली गर्ने भन्दै दिएको राजीनामा पेश भएको छ । तर त्यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
आफू पक्षधर मानन्धरले कुनै सल्लाह नगरी राजीनामा दिएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्षधरहरू सशंकित देखिएका छन् । प्रचण्ड भने वामदेवालाई तत्काल संसदमा ल्याउन सकारात्मक छन् । तर वामदेवले हार्ने अवस्थामा चुनाव नगराउने प्रचण्डले बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका थिए ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का मतदाता र पार्टी पंक्तिमै विरोध हुन थालेपछि वामदेवको जीत सुनिश्चित नभएको प्रचण्डले बुझेका छन् । जस कारण उनले वामदेवले हार्ने अवस्थामा चुनाव नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल मौन बसेका छन् भने अर्का सदस्य ईश्वर पोखरेलले कूटनीतिक भाषामा गौतमको विरोध गरेका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव समेत रहेका विष्णु पौडेलले पनि वामदेवका लागि तत्कालको समय अनुपयुक्त रहेको बताएपछि वामदेवको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट सांसद बन्ने यात्रा तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका गौतमलाई संसदमा ल्याउन सबै सकारात्मक भएपनि अवस्था भने गौतमको पक्षमा देखिएको छैन ।
सामाजिक सञ्जालमा गौतमको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । जसका कारण गौतमको छवि थप धुमिल भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले गौतमलाई संसदमा नल्याई नहुने किन भन्दै प्रश्न गरेका छन्, जसको जवाफ शायद नेकपाका नेताहरूले दिन सक्ने छैनन् ।
किन सांसद बन्न चाहन्छन् वामदेव ?
वामदेवको सांसद बन्ने चाहनालाई कतिपयले उनको प्रधानमन्त्री बन्ने योजनाको रूपमा हेरेका छन् । तर वामदेव स्वयंले भने विकास निर्माणका लागि आफू सांसद बन्न खोजेको बताउँछन् । गौतमले अधिकार सम्पन्न विकास प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न आफू सांसद बन्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
समृद्धिको लक्ष्य लिएको सरकारलाई सफल बनाउन र घोषणा पत्रमा भनिएको कुरालाई पूरा गर्न आफू प्रतिनिधिसभा जान खोजेको उनको भनाइ छ । गौतमले आफूले मानन्धरलाई राजीनामा गर्न नलगाएको दाबी पनि गरेका छन् । मानन्धरले नै बुझेर आफूलाई ठाउँ खाली गरिदिन लागेको उनको भनाइ छ ।
नेता गौतमले आफूलाई बर्दियामा पराजित गर्ने पूर्व एमालेका केही शीर्ष नेता अहिले पनि सक्रिय रहेको अरोप लगाएका छन् ।